Imibala yephepha lamapolisa Ukufumana imibala yamaphepha asimahla
Uhlobo lwamapolisa kwiphepha
Abantwana badinga ukuphefumlelwa rhoqo. Imibala yokubala kunye neencwadi zokubala imibala zenza igalelo elikhulu ekukhuthazeni ngokucokisekileyo ubuchule bomncinane wethu. Akukho myalelo wesithupha xa umntwana ekhulile ngokwaneleyo ukuqala ukupenda okanye xa kufuneka uqale. Kodwa kubalulekile ukuba imihla ngemibala enemibala ivuliwe ukuze ilandele abantwana.
Ukubala imibala yamapolisa kunye nabaphangi bebhanki
Kwaye kukho izihloko ezinomdla ngakumbi kubantwana kunomsebenzi wamapolisa. Kuqikelelwa ngokwaneleyo ukuba sinikele iphepha lamaphepha apha kumapolisa. Ngokuchofoza kumfanekiso, iphepha lokubala livuleka kwifomati yefayili
Umbala wamaphepha oPolisa avuliwe njengemifanekiso
Ngaba sele uyayazi zethu I-Word search puzzles ezijikeleze amapolisa?
Umbala wePolishwoman page | amapolisa
Ukubala imoto yamapolisa kwengozi
Incwadi yegama eligqithisileyo yamapolisa amagama